App Annie wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku darto tirakoobka barnaamijyadaada Apple TV | Wararka IPhone
App Annie wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku darto tirakoobka barnaamijyadaada Apple TV
Pablo Ortega | | Barnaamijyada IPhone, Apple tv, Alaabada Apple
Haddii aad tahay horumariye, hubaal waad ogtahay Barnaamijka Annie si qoto dheer. Waa websaydhada sida aadka ah loo dalbado si loo helo tirakoobka arjiga ee App Store. Annaguna waxaannu u haynaa war wanaagsan bulshada horumarinta, maxaa yeelay App Annie hadda wuxuu galayaa jiilka afraad ee Apple TV. Horumariyayaashu waxay ikhtiyaar u heli doonaan inay ka helaan falanqaynta iyo xogta tirakoobka App Store oo u khaas ah barnaamijyada Apple TV.
App Annie wuxuu awood u leeyahay inuu falanqeeyo barnaamijyada bilaashka ah ee bilaashka ah iyo kuwa la bixiyo ee ku jira Apple TV App Store. Waxay sidoo kale muujineysaa horumariyeyaasha darajo leh barnaamijyada ugu mushaharka badan iyada oo loo marayo Apple set. Barxadda ayaa horay u daabacday warbixinnadeedii ugu horreeyay ee dhadhanka isticmaalayaasha jiilka afraad ee Apple TV lagu muujiyo inta lagu jiro Kirismaska.
Tusaale ahaan, waxaan awoodnay inaan ogaanno in qaybaha doorbidaya isticmaaleyaasha dejintu ay yihiin ciyaaro iyo madadaalo. Inta badan barnaamijyada ugu badan ee la soo dejiyey ee TOP 100 waxaa iska lahaa mid ka mid ah qeybahaas. Dalka Mareykanka oo keliya, barnaamijyada madadaalada ayaa ka sarreeyay soo dejinta ciyaarta. Maxay tahay sababta dhaqankan oo ka yaabin karta wax ka badan hal? Xaqiiqda fudud ee daawadayaasha Mareykanku ay door bidayaan inay ku macsalaameeyaan telefishanka telefishanka oo ay ku cunaan taxanahooda ay ugu jecel yihiin barnaamijyada Apple TV, ikhtiyaar ka dhaqaale iyo raaxo badan
Sida aan filan karno, Netflix waa mid ka mid ah barnaamijyada la soo dejiyey ee ku jira qiimeynta App Annie, oo ay weheliso VLC.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple tv » App Annie wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku darto tirakoobka barnaamijyadaada Apple TV
IPhone 6s ayaa ahaa taleefankii casriga ahaa ee ugu awooda badnaa sanadkii 2015, sida laga soo xigtay AnTuTu
Khariidadaha Google ayaa awoodi doona inay qiyaasaan meelaha aad ku socoto